ezé Stains | Best Way to whiten Ezé Guide
posts akpado "ezé Stains"
Wepụ Your Ezé Stains Ma achagharị ndị a Atụmatụ
Na-ezé gị ka na-acha ọcha dị ka o kwere nwere ike ịbụ oké ọnụ ma na-ewe. E nwere ọtụtụ ụzọ na-whiten ezé. Eji ihe ndị a aro i nwere ike inyere whiten ezé na mfe ejiji.
Ihe mbụ unu ga-eme ka whiten ezé gị bụ agachi eze cleanings. Jide n'aka na ị na-aga biannual ihicha emek gị eze hygienist. O nwere ike ịbụ kama mfe ka dị nnọọ ka ọ na-agafe otu ụbọchị ma na-eme atụmatụ na ikekwe brushing ugboro abụọ ka ike echi, ma nke ahụ bụ ihe ị ga-mgbe na-eme. Ka ọ na slide ozugbo na ị na-yiri ka ịdaba a àgwà na-aga n'aka nri azu square otu.
NDỤMỌDỤ! Jide n'aka iji zere kọfị, mmanya na sịga. Ndị a na ngwaahịa nwere ọchịchịrị Chemicals na ga n'iku ezé gị.
Ọ na-e ugboro ugboro gosiri na sịga ọkụ discolors ezé gị.
Ọ dị mfe inweta ezé whitening ibe, na ha bụ ndị ezi ọnụ. Nanị ebe ahụ warara on ezé gị maka ego nke oge e nyere na ntụziaka, na ezé gị ga-whitened. Ndị a ibe ha yiri ka o na-enye ogbenye pụta, na mgbe ha na-abụrụ nnọọ ewu ewu, ha na-agaghị zụtara ihe dị ukwuu site na-eji ọkụ.
NDỤMỌDỤ! Mgbe ị na-eri nri ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ, ị kwesịrị ị na ozugbo na-eji mmiri itucha si n'ọnụ gị. Nke a ga-enyere na fọduru site staining ezé gị.
Floss na asa ezé gị dịkarịa ala ugboro abụọ kwa ụbọchị. Nke a na-enyere gị agha e dere ede tupu ya nwere ike iru elu ma na-eme ezé gị anya mkpari na discolored. Kama ikwe ka ihe e dere ede na-anọdụ ala na ezé gị niile abalị, abọ na floss tupu alakpu ụra.
NDỤMỌDỤ! Whiten ezé gị ndammana na strawberries. Strawberries a mara na-emepụta na-acha ọcha ezé.
Ị nwere ike na-aghọtakwu ụfọdụ ezé enwu gbaa na ngwaahịa nwere ike na-emepụta. Ọ pụrụ ịbụ nnọọ na-egbu mgbu na nwere ike ịbụ a obere oge ma ọ ka na-ewute. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ nke a uche, gara na gị dọkịta ezé tupu ị nọgide na-eji ihe ọ bụla enwu gbaa na ngwaahịa. Ọ nwere ike ikwu na a ngwaahịa na gaghị Mmetụta ezé gị na ụzọ.
Nweta a ego-si gị dọkịta ezé iji hụ na ọ dịghị ize n'ihi na ị na whiten ezé gị. Unu gị n'iyi oge na ego na-agbalị ọ bụla n'ụlọ whitening ngwaahịa. N'ịdabere na gị dọkịta ezé nka bu ka nnọọ oru oma ụzọ nke ịnọ ná arụ ọrụ otú kacha mma n'ihi na ị.
NDỤMỌDỤ! Ịṅụ oké mmiri bụ oké Usoro enyere na-ezé gị na-acha ọcha. Mmiri ọṅụṅụ on a ugboro ugboro ndabere ga-enyere na stains si akpụ ga na-ezé gị freshly rinsed.
Ị nwere ike mkpa ime a ugboro ugboro iji nweta gị ezé anya nnọọ ntụpọ.
Aṅụ site ahịhịa pụrụ ibelata nha nha staining si ọṅụṅụ. The ahịhịa na-enyere mbenata oge na onunu nwere n'iku ezé gị. The mmiri mmiri na-aga ogologo ala gị akpịrị kama eme kọntaktị na ezé gị.
NDỤMỌDỤ! A eze ọkachamara nwere ike nweta elu mma na-arụpụta karịa mgbe ị na-eji n'elu counter ngwaahịa. Nke a na usoro nke ezé whitening na-akwụ ụgwọ ọzọ, ma pụta bụ na ozugbo.
Gị dọkịta ezé nwere ike inye gị ndụmọdụ banyere nke na-home enwu gbaa ngwa iwu ndị dị irè na-enweghị ndibiat ezé gị ma ọ bụ goms.
Ịkwụsị ịṅụ sịga n'ihi na ezi. Mgbe ese anwụrụ a mara onye ọjọọ n'ihi na gị n'ozuzu ike, ọ bụkwa ihe ọjọọ n'ihi na gị ezé. N'ezie, otu n'ime ndị kasị pụta ìhè ịrịba ama na mmadụ bụ onye a na-ese siga bụ ha odo ezé. Ọ pụrụ isi na-acha ọcha ezé mgbe aṅụ sịga. Ịkwụsị ịṅụ sịga bụ nnọọ ike, ma ọ bụla sịga i zere ga ibelata mmetụta na ezé gị.
NDỤMỌDỤ! Ịzụta ihe electric atu bụ oké ụzọ nweta acha ọcha ezé. Electronic toothbrushes enyere wepu stains si nri, mmanya na-emepụta sịga na ngwaahịa ọzọ juputara karịa a ntuziaka atu.
Asa ezé gị anya ma ọ bụrụ na i nwere a ukwuu smile.Food na ihe ndị ọzọ nwere ike iru on ezé gị na discolor ma ọ bụ n'iku ha mgbe oge ụfọdụ. Ọ kwesịghị na ị ga-enwe nchegbu banyere achagharị ka ogologo dị ka ị mgbe nile asa ezé gị.
Ekiri maka ihe ọ bụla uche na ezé gị na-agazu n'agbụ mgbe eji whitening toothpastes ma ọ bụ ibe ke ufọk. Ọ bụrụ na nke a ga-eme, anya n'ihi na ngwaahịa ndị na-enweghị ihe dị ukwuu peroxide na ha. -emekarị, ndị a obere mmetụta ga-apụ n'anya ụbọchị ole na ole mgbe unu maliteworo iji ngwaahịa.
NDỤMỌDỤ! Mara otú ọma gị họọrọ ezé whitening usoro anamde. I nwere ike-emechu ihu ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya ihe karịrị na-enwu gbaa usoro pụrụ ịnapụta.
Gbalịa na-asa ezé na ụfọdụ strawberry ihe ọṅụṅụ. Nke a bụ a pụtara ọnụ ala ụzọ iji na-enweta ọnụ ọchị i mgbe niile chọrọ.
Nha nha Enamel di ugbua ka enwere ịnweta bekee ike igbochi nje nke na mgbọrọgwụ na nsogbu ndị ọzọ ọ pụrụ imerụ ezé. Ụfọdụ u na-enwu gbaa na ngwaahịa, gụnyere ike asịd, nwere ike imebi gị Enamel na-eme ka ndị ọzọ na mmetụta ọjọọ.
NDỤMỌDỤ! Ọ bụ a zuru ebe nile kwesịghị na-eji lemon na wayo ihe ọṅụṅụ na-ezi ụzọ na-ezé gị chawapụrụ, ma nke a dị nnọọ abụghị ikpe. Nke a ezighị ezi dị ka mgbe ha nwere ike whiten ezé gị dịtụ, ha inwe ihe ize ndụ ka mma.
Ọ bụrụ na ọsọ na arụmọrụ bụ gị n'elu ezé-whitening na-ebute ụzọ, ị kwesịrị ị na-eleta dọkịta gị ozugbo. Whitening ezé gị bụghị mgbe niile mfe ịchọ mma ọrụ. -Enweghị ebe a dọkịta ezé, ị n'ihe ize ndụ na-ebibi gị ezé na gị n'ozuzu ji ọnụ na ahụ ike karịrị oge na-.
Jide n'aka na ị floss mgbe nile. Flossing ukwuu AIDS na ihe e dere ede mwepụ nke, n'oge ya, ike nyere aka gbochie staining ezé gị. Ka ọ bụrụ àgwà nke flossing kwa ụbọchị na-ebu ụfọdụ na ị na-eji mgbe ọ bụla nri. Jide n'aka na-floss ezé gị tupu alakpu ụra nke mere na unu adịghị ekwe ka bacteria na ịnọgide ezé gị niile abalị.
NDỤMỌDỤ! Gbalịa na-eri crunchier oriri. Ezé pụrụ ịghọ ihe na-acha ọcha iri celery, apụl na carrots.
Whitening ezé itienna nwere ike ịbụ oké ụzọ whiten ezé gị. -Nọgide na mmetụta nke jel mgbe ị na-eji mm uo ozi n'ihi na ha bụ akin ka a ịcha ọcha. Ị ga-eji ịkpachara anya na usoro a ma hụ na ị adịghị eme ya kwa mgbe.
Mix lemon ihe ọṅụṅụ na table nnu maka a arụrụ n'ụlọ enwu gbaa ngwaahịa. Na-na ngwakọta kaa akara na a akpa, na-eji ya karịrị oge na ole na ole na-echegbu banyere ya kwụsị.
NDỤMỌDỤ! Ezé whiteners ekwesịghị a ga-eji ruo mgbe i nyochakwara na gị dọkịta ezé. Ị pụrụ ịchọpụta na ihe niile ị chọrọ maka sachaa ọcha bụ ezi ihicha.
Eletrik atu dị mma karịa oké ụzọ dịtụrụ gị ọnụ ọchị. Electric toothbrushes ezé dị ọcha nke ọma na-na-emekarị iji wepụ elu elu discolorations gị teeth.They ọcha anya bụla odo na agba site n'elu ebe ezé gị.
Zere tii na kọfị iji gbochie staining ezé gị. Ndị a na-egbu egbu discolor ezé mgbe ị na-aṅụ ha mgbe niile.
NDỤMỌDỤ! Mgbe nri na-ata chịngọm ka ị na ezé na-acha ọcha ma dị ọcha. E nwere ọtụtụ goms na-ebu enwu gbaa mmadụ nke uche nwayọọ nwayọọ fad discolorations.
Unu ga-ghọgburu site toothpastes nke na-advertised dị ka ezé enwu gbaa. Ha pụrụ inye aka whiten ezé gị, ma ị ga mkpa iji ha na njikọ na ibe usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ whitening ntacha eze, esi ọnwụ onye na e dere mmiri soda.
I nwere ike na-agbalị na-asa ezé na-eji bee nke a banana. Ọtụtụ ndị na-ahụ nke a mfe atọ na-nnọọ irè. -Ete n'ime a banana bee n'elu ezé gị na-whiten. mgbe ahụ, -eso na mgbe nile brushing. The whitening ga-arụpụta ga na-apụtakwu ìhè ozugbo.
NDỤMỌDỤ! Search n'ihi ezé whitening na ngwaahịa na gị yad kama ụlọ ahịa ọgwụ. N'ụgbụgbọ na ukpa osisi dị mma amaara maka iwepu stains si ezé.
Asa ezé gị ozugbo mgbe akadaha, na ka anya dị ka ị chọrọ ịlaba ịhụ ezé gị ga-esi acha ọcha.
Jide n'aka na-mgbe na-eji a ezé whitening usoro ma ọ bụrụ na ị bụ na ihe ọ bụla na ogbo nke afọ ime ma ọ bụ na-ara. Abụ na nwa ara na nne na nnọọ mwute goms. Na mgbakwunye, na ọgwụ ndị dị na ngwaahịa ndị a nwere ike ịbụ mfịna. Kama, dị nnọọ ka ị na-amụmụ ọnụ ọchị na-enwu gbaa ya na ezi brushing na flossing eme n'oge a pụrụ iche oge. Ị nwere ike ịpụ na-na ezé gị whitened mgbe ị dị ime ma ọ bụ nọọsụ oge zuru ezu.
Mara ihe na-atụ anya n'aka gị ezé whitening usoro a na-aga imere gị. Ị nwere ike ejedebe n'ihi na ndakpọ olileanya ma ọ bụrụ na gị atụ anya bụ onye oké. Jụọ dọkịta ezé ihe na-atụ anya.
Nha nha Enamel echebe ezé si na-efe efe nke na mgbọrọgwụ na nsogbu ndị ọzọ ọ pụrụ imerụ ezé. Ngwaahịa na nwere nnukwu acidity ma ọ bụ ndị ọzọ na-egbu egbu ọgwụ ike ga-etisa ezé gị ihe karịrị ya ga-enyere ha.
acha ọcha Ezé
Na-acha ọcha ezé ị chọrọ nwere ike ịbụ oké ọnụ na dịtụ nke a hassle. Ọtụtụ ngwá ọrụ na ụzọ na-esi n'ebe inyere gị aka acha ọcha ezé. Site n'itinye a Atụmatụ, ị pụrụ inweta acha ọcha ezé-enweghị nọrọ gị ego gị na ọkachamara ngwọta.
Ihe site whiten Ezé Guide - June 5, 2016 na 12:39 AM
Categories: Home Dabere na whiten Ezé Tags: wepụ achagharị, Wepụ Ezé Stains, ezé Stains